ရင်နှင့်အမျှ…မောင် (စ\_ဆုံး) – Grab Love Story
အသားညိုညို မျက်နှာကအမြဲပြုံးချိုနေပြီး သဘောကောင်းမှန်းမြင်ရုံနဲ့သိသာစေတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်ပေါက်စ အိမ်ထောင်မရှိ သမီးရှင်တွေမျက်စိကျတဲ့အပြင် သူ့အနား ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရဆိုတဲ့ စကီတွေအများကြီး။ အနေတည်ပြီး မိန်းကလေးတွေနဲ့အလုပ်ကိစ္စကလွဲပြီးမပြောတတ်သူမို့ ရှိန်ကြတယ်။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ကိုဇော်မိုး မှာ အပြင်လူတွေမသိအောင် စိတ်ဖိစီးတာ တွေ ပျောက်ဖို့အတွက် စတိဗ်ဂျော့ဆိုတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်လေးဖွင့်ပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်တွေရေးတင်တဲ့အကောင့်ပေါ့။ လူကုံတန်တွေ လူလတ်တန်းစား ဆင်းရဲသား လူတန်းစားအမျိုးမျိုးတွေကြားမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှု ဆက်စ်ကိစ္စတွေ ရေးတင်တော့ စာလည်းအရေးကောင်းသူဖြစ်တော့ လူသိများတဲ့စာရေးသူဖြစ်လာတယ်။
နန္ဒီ အသားဖြူဖြူ အရပ်မနိမ့်မမြင့် ခပ်ပြည့်ပြည့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်။ သူက မိသားစုဖိစီးတာတွေများလို့ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်တစ်ခုကို ချယ်ရီဇော် ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖွင့်ပြီး ဆက်စ်ဆီ ဆန်ဆန်ပုံတွေတင် ချက်ဘောက်စ်မှာ ရိသလိုထေ့သလို တုတ်ပြခဲပြတာဇံတွေကို Ss တင်ဆဲပြီး စိတ်ထွက်ပေါက်ရှာနေသူ ကြမ်းလွန်းလို့ တဖြည်းဖြည်း လူသိများ လာတယ်။ တစ်ခါတလေ အမြင်ကတ်လာရင် ပြောနေကျစကားက ၈ လက်မရှိမှ ငါ့လာပြကြဟဲ့ တဲ့။
မချယ်က အချစ်တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတော်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဖိုရမ်ထဲဝင် ပိုစ့်တွေတင်ရင်း မော်ကွန်းထိန်း ကွင်ပြုံး၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးဖီဖီထွန်း၊ ချစ်စရာကောင်းသလိုအပြောပြတ်တဲ့မသိမ့်၊ သူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအပေါ်ကလေးဆန်ပြီးချွဲနွဲ့တတ်တဲ့ ငွေမွန်းလေး၊ပီဒီအက်ဖ်ဖိုင်တွေလုပ်ပေးတဲ့အကိုရီဆာ့ချာ၊ နောက် မီးမီးဆိုပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့အစ်မ တွေနဲ့ လူရောစိတ်ပါရင်းနှီးလာကြတယ်။
တစ်နေ့တော့ ကိုဇော်မိုး က ချယ်ရီဇော် ဆိုတာကို သူနဲ့ခင်တဲ့သူနဲ့နာမည်တူနေတော့ လာမိတ်ဖွဲ့ စကားပြောပြီး ခင်မင်သွားကြတယ်။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ပေါ့ ခင်မင်မှုသက်တမ်းတွေ ကြာလာတဲ့အခါ ကိုဇော်မိုး က သူ ပထမဆုံး ရေးဖူးတဲ့ စာအုပ်ဖတ်ကြည့်မလားလို့မေးတယ်။
ဖတ်ပြီးရင် ဝေဖန်ပေးပါမချယ်တဲ့။ သူ့စာအုပ်လေးနာမည်က ငပွေး တဲ့။ မချယ်တစ်ယောက် ရုံးမှာ ငပွေးစာဖတ်မိတာ အရမ်းရယ်နေလို့ သူများတွေကစိတ်ဝင်စားပြီး လှည့်ကြည့်မိတဲ့အဖြစ်ရောက်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကိုဇော်မိုး ရယ် မချယ်ရယ် တစ်ရစ်ပြီးတစ်ရစ်ခင်မင်မှုတွေတိုးလာသလို သံယောဇဉ် လေးပါ မသိမသာလေး တွယ်လာကြတယ်။တစ်ယောက်မတွေ့ရင်တစ်ယောက်က နေကောင်းလား… မအားဘူးလား စသဖြင့် message လေးတွေချန်ထားတဲ့အကျင့်တွေ ဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။ မချယ်က ကိုဇော်မိုးရဲ့
ငပွေး ဆိုတဲ့စာ ဖတ်ပြီး pdf file လေး မသေမသပ်နဲ့ထုတ်ပေးဖြစ်တယ်။ သူအကြိုက်ဆုံးစာအုပ်လေးဖြစ်သလိုမချယ်သဘောအကျဆုံးစာလည်းဖြစ်နေပြန်တယ်။ ဒုတိယအကြိမ် pdf ကို လှလှပပ ပြင်ပြီး ထုတ်ပေးဖို့ ငွေမွန်းက ချယ်ချယ်နဲ့အူးစတိအမှတ်တရဆိုပြီး ပြင်ပေးခဲ့တယ်။တကယ့်ကိုအမှတ်တရဖြစ်စေ ခဲ့တယ်။
တစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုတစ်ယောက် ရင်ဖွင့်ခံစားရင်း နီးမှန်းမသိနီးလာခဲ့ကြတယ်။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စလိုက်နောက်လိုက်နေလာရင်း ကိုဇော်မိုးရဲ့ သူငယ်ချင်း တွေဖြစ်တဲ့ ကိုဖိုက်နဲ့ကိုယ်တော်ကြီးတို့ကောင်းမှုနဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်လာကြတယ်။ အမှန်တော့ သူများမြှောက်ပေးတာထက် မစွန်းရင်းကလည်းရှိ ကန်စွန်းခင်းကလည်းငြိ ဆိုတာမျိုးပါ။ ဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်နဲ့နေလာကြတယ်။ ကိုဇော်မိုး က အနေအေးသလောက် မချယ်က ဆတ်ဆတ်ထိမခံ။ တစ်ခုခုဆို သူ့ကို ကြောတယ် ထင်ရင် ပြန်ချေဖို့ ရယ်ဒီဖြစ်နေသူ။ တော်ရုံလူနဲ့လည်းသိပ်မရောသလို စီဘီမှာ မခင်ပဲ ယောင်လို့စကားမပြောသူ ကိုယ့်ကိုရိုင်းရင် ဆယ်ဆပိုရိုင်းတတ်သူဖြစ်လာတယ်။
ကိုဇော်မိုးရဲ့ ချစ်သူဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ မချယ်ဖက်က စိတ်ပူတဲ့သူရှိသလို မချယ်လို ဂျမ်းဒေါမနဲ့မကြိုက်စေချင်တဲ့သူတွေရှိကြတယ်။ သူတို့မသိတာတစ်ခုက မချယ်နဲ့ကိုဇော်မိုး နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဖြတ်ဖို့မလွယ်တဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်း ချည်နှောင်နေတာကိုပါပဲ။ မချယ်ဆိုးသမျှရစ်သမျှ ဂျီသမျှ အတော်သည်းခံနိုင်သူပါ။
မချယ်ရဲ့အကျင့်က တစ်ခုခုကို စိတ်ဆိုးမိရင် မပြေလွယ်သူ။ အတေးအမှတ်ထားတတ်သူမို့ ကိုဇော်မိုး အစစအရာရာ ထိန်းပေးနေရတယ်။
မချယ်ရဲ့မိသားစုအရေးသိလာတော့ ကိုဇော်မိုး ပြေလည်အောင် မချယ်ကို စိတ်လျှော့ဖို့
အဆင်ပြေစေဖို့ အကိုလိုမျိုး ဆုံးမသွန်သင်လိုက် နားလည်အောင် ဖျောင်းဖျလိုက်နဲ့ မချယ်က အရင်လို စိတ်ကြမ်းလူကြမ်းကနေ တဖြည်းဖြည်း ချစ်တတ် နူးညံ့စပြုလာခဲ့တယ်။
မချယ်က ကိုဇော်မိုးနဲ့ချစ်ကတည်းက ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့မှ မထားခဲ့ဖို့ ကတိတောင်းထားတယ်။ ကတိတည်သူမှန်းသိလို့ ကတိတောင်းခဲ့တာပေါ့။ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ ကိုဇော်မိုးရဲ့အလုပ်တွေများလာတယ်။ ပြည်၊ မုံရွာ၊မကွေးထိပါ စီးပွားရေး နယ်ကျယ်လာခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်မှာ နေရတာထက် နယ်မှာနေရတာများလာတာမို့ မချယ်နဲ့ တွတ်တီးတွတ်တာပြောဖို့ အချိန် မရှိသလောက်ဖြစ်လာတယ်။ သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တော့မဟုတ်ပေမယ့် အလုပ်လုပ်နေရရင် အရာအားလုံးမေ့ထားနိုင်တဲ့ သူမို့ မချယ်ရဲ့ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် အရစ်တက်တာတွေ ခံလာရတော့ ကိုဇော်မိုး စိတ်ညစ်စပြုလာတယ်။
ကိုဇော်မိုး က ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းဘူး။ခေါင်းကိုက် ဝေဒ နာကြောင့် အလုပ်ကိုနားမယ်အထိ သူ စဉ်းစားခဲ့တယ်။ မချယ်က ဒါကိုသိတော့ ကိုဇော်မိုး ကို ကတိတစ်ခုထပ်တောင်း ခဲ့တယ်။ မောင် ကျန်းမာအောင် နေမယ်လို့ ကတိပေးပါ ဆိုပြီးလေ။ “မောင်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မချယ်ဘဝမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှမခေါ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အသုံးအနှုန်းတစ်ခု။ ငယ်ငယ်က အရမ်းမှန်တဲ့ ဗေဒင်ဆရာက ဟောဖူးတယ် အရမ်းချစ်မိသူတစ်ယောက်ကို မောင် လို့ မခေါ်ပါနဲ့ တဲ့ ရင်ကွဲနာ ကျပြီး ရှင်ကွဲကွဲရမယ်တဲ့ လေ။ ကိုဇော်မိုး နဲ့ ချစ်ကြတော့ သူ့ကို မောင် လို့ ခေါ်ပါတဲ့။ မခေါ်ပဲနေလို့မရဘူးလားမေးတော့
သူ့ကို တစ်ကယ်ချစ်ရင် ခေါ်ပါတဲ့လေ။ ကိုယ်က
ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင် ဆိုက်ကိုရှိတာမို့ ကြိုပြောပြပေမယ့် မောင်က တျဲရယ် အစွဲအလန်းမထားပါနဲ့တဲ့လေ။
ဒီလိုနဲ့ ချစ်လိုက် အရစ်ခံလိုက်နဲ့နေနေရင်း ချစ်သူသက်တမ်းကြာလာခဲ့တယ်။ နှစ်ယောက်လုံးအားလို့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ မောင့်ဆီက အနမ်းရယ် လက်ကိုင်တာကလဲပြီး နယ်မကျော်ခဲ့ဘူး။ လက်ထပ်မယ် ဆိုတဲ့စကား မပြောဖြစ်ကြဘူး။ မချယ်က နှုတ်ခမ်းနီ ကြိုက်သူမို့ မောင်က ဆောင်းလေးရောင်းတဲ့ ခီခီ နှုတ်ခမ်းနီ ငါးချောင်း မုန့်တွေနဲ့ ဝယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ မချယ် လက်ဆောင် ရလို့ပျော်တာထက် ချစ်သူက အသေးစိတ်ဂရုစိုက်တာမို့ ကြည်နူးရတယ်လေ။ မချယ်မောင့်ကို အားလုံးအမှန်တွေ ပြောပြခဲ့ပေမယ့် မောင့်ကိုလုံးဝ မသိစေချင်တဲ့အရာတစ်ခုကို လုံးဝမပြောခဲ့ဘူး။ မချယ်မှာ ငယ်စဉ်က ကားပေါ်ကပြုတ်ကျခဲ့လို့ ခေါင်းထဲသွေးခဲပိတ်ပြီး ခဏခဏ သတိလစ်တဲ့ ရောဂါ အဲ့ရောဂါရဲ့အကျိုးဆက်က ပြောနေရင်းစကားကိုမေ့ပြီး ဘာမှစဉ်းစားမရတာ ကမောက်ကမဖြစ်တာမျိုး… ကြီးလာရင် ပိုဆိုးမယ်ဆိုတာမို့ အဲ့တစ်ခုမပြောပြရက်ခဲ့ဘူး။
စိတ်ရင်းအမှန် က သူ့ကို ပျော်စေချင်ခဲ့တာ။
ကိုဇော်မိုးရဲ့ အချစ်ကထူးဆန်းတယ်။ ရင်ထဲရှိသလောက်ထုတ်မပြတတ်ဘူး။ သူ့အတွေးက နှလုံးသားချင်း သိနားလည်ပြီးသားမို့တဲ့။ မချယ်ကျတော့ အချစ်ခံချင်တယ်။ ချစ်သူရဲ့ဂရုစိုက်တာခံချင်တယ်။ အသေးအဖွဲလေးတွေကို ချစ်သူကို တိုင်ပင် ပလီပလာတီတီတာတာပြောချင်တယ်။ ကိုဇော်မိုး ကို စိတ်တိုစိတ်ဆိုးချင်ပေမယ့် အဲ့စိတ်ထက်အချစ်စိတ်ကသာနေတော့ မဆိုးရက်ဘူး။ မချယ်က ကိုဇော်မိုး နဲ့ ချစ်ပြီးမှ နွဲ့တတ် လာသလို အားကိုးစရာ မှီတွယ်စရာ ရင်ခွင်ကြီး ရလာတယ်လေ။ ကိုယ့်ထက် အစစအရာရာ ပြည့်စုံသူမို့ သူဌေးကိုကြေးပ ရမယ့်အစား တန်ဖိုးနည်းပေမယ့် အမှတ်တရ ရှိစေမယ့် Handmade အရုပ်လေး လက်ဆောင် ပေးခဲ့တယ် ချစ်သူများနေ့အမှတ်တရပေါ့။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မချယ်ရဲ့မွေးနေ့နီးလာတယ်။ တစ်ရက်မှာ အစောကြီး ဟက်ပီးဘတ်ဒေးပါတျဲရေ တဲ့ ရက်မှားပြီး ဘတ်ဒေးဝှစ်ရ်ှပေးလို့ အံ့ဩ မိပြီး ရယ်ရသေးတယ်။ တကယ်ကျရောက်တဲ့မွေးနေ့မှာတော့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ လက်ဆောင် တစ်ခုက အမှတ်တရ အနေနဲ့ ရောက်လာခဲ့တယ်။ မောင့်ကို အချိန်တိုင်း သတိရပေးပါ တဲ့ လေ။ ဘဝမှာ ရည်းစားတွေ
ထားခဲ့ဖူးပေမယ့် ဒီလို ပီတိမျိုး ဂရုစိုက်ခြင်းမျိုး မရခဲ့ဖူးဘူး။
မချယ်လည်း ရုံးအလုပ်တွေရဲ့ ပရက်ရှာတွေ မခံနိုင်လွန်းလို့ လုပ်သက်ခွင့်ယူပြီး အမေ့ကို ဘုရားဖူးပို့။ အားတဲ့အချိန်လေး မောင်နဲ့လည်မယ်ဆိုပြီး Master Plan တွေချနေတဲ့အချိန်မှာ မပြောမဆိုနဲ့ မောင်က နယ်ဆိုက်ထဲ ခရီးထွက်သွားတယ်။ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ မှန်းသိပေမယ့် စိတ်ဆိုးမိပြီး မောင့်ကို မခေါ်ပဲ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ ဘုရားဖူး ရတဲ့အချိန်မှာ ရသလိုလည်နေပြီး မောင့်ကို မဆက်သွယ်ပဲနေလိုက်တယ်လေ။
မှတ်မှတ်ရရ ကျိုက်ထီးရိုးက အသွား မောင့်ဆီက ဖုန်းဝင်လာတယ်…. “တျဲ ဘယ်တွေသွား ဘယ်တွေရောက်နေတာလဲ” တဲ့
မောင်မအားဘူးမလား လိုက်မပို့အားဘူးထင်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သူငယ်ချင်း တွေစုပြီး လျှောက်လည်နေတာပြောတော့ အိမ်မှာပဲ နေ ညကျရင် မောင်လာခေါ်မယ်တဲ့။ ခေါ်မနေပါနဲ့ ခညားနဲ့ ပြတ်ပြီ။ ကိုယ့်ကို အရေးမလုပ်တဲ့သူမျိုး မချစ်တာပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီး ရန်လုပ် ဖုန်းချလိုက်တယ်။ သူဖုန်းခေါ်နေပေမယ့် မကိုင်တော့ဘူး။
ညမိုးချုပ်မှ အိမ်ပြန်ရောက်တယ်။ သားအမိတွေ ညစာစားပြီးတဲ့အချိန် ဖုန်းဝင်လာတယ် ။ တျဲရေ မောင် အိမ်ပျောက်နေလို့တဲ့။ အဝိုင်းပတ်ကို ကျော်နေတာ နှစ်ခါ ရှိပြီတဲ့။ စိတ်ကောက်နေတဲ့ ကြားက သနားမိပြီး တျဲဆင်းလာခဲ့မယ်မောင် လို့ပြောမိသွားတယ်။ အိမ်အောက်ဆင်း မလို့လုပ်တော့ အမေကဘယ်လဲတဲ့…. ကိုဇော်မိုး လာခေါ်နေတာအမေလို့ လိုက်သွားမယ်လို့ ခွင့်တောင်းပြီး အပြေးဆင်းခဲ့တယ်။( မောင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အကြာကြီးပစ်မထားရက်သူပါမောင်)
မောင့်ကား ကိုယ့်ဘေးမှာလာရပ် တျဲ တက်လေ တဲ့။ မျက်စောင်းထိုးပြီး တက်လိုက်တယ်။ “တျဲ ယူကီမူဂီ မုန့်စားချင်တယ်ဆို” သွားစို့တဲ့။ လူကို စိတ်ဆိုးနေမှန်းသိသားနဲ့ မသိသလို စကားရောဖွဲရောလုပ်တာလေ။ မုန့်ဆိုင်ရောက်တော့စားချင်တဲ့မုန့်တွေက ကုန်တာခပ်များများမို့ ရှိတာပဲ ပါဆယ်ဝယ်ခဲ့ရတယ်။
မုန့်ဆိုင်မှာ တန်းစီတော့ သူ့လက် တံတောင်က ကိုယ့်ရဲ့ ရွှေရင်ဖြိုးမောက်ကိုထ ခဏခဏ ထိမိတယ်။ ဆောရီးနော် တျဲ မောင်မတော်တဆထိမိတာနော်။ 😏😏😏
“တျဲ” ကန်ဘောင်သွားထိုင်စို့…. ထိုင်စရာနေရာမရှိ…. ရခိုင်ဆိုင်သွားမယ်တျဲ(စိတ်ဆိုးရန်တွေ့မစိုးလို့ပါးစပ်ထဲအပြည့်မုန့်ထည့်နေတာ… အကြံဆိုးနက်)… ရခိုင်ဆိုင်ရောက်တော့ တျဲ ပုစွန်စားကြမလား တျဲကပုစွန်ကြိုက်တယ်လေ ဆိုပြီး ခွံ့မကျွေးရုံတမည် ဂရုစိုက်နေတော့ စိတ်ပြေမိရောပေါ့လေ။ သူနဲ့ အတူရှိတဲ့ အချိန်က မချယ်အတွက် အကုန်မြန်နေသလိုခံစားရတယ်။ အလုပ်အကြောင်းကို အားကြိုးမာန်တက် ပြောပြနေ တဲ့ မောင့်မျက်နှာကို ကြည့် နေရင်း နားထောင်လိုက် သူ့အခက်အခဲတွေ ပြောပြတာကို စကားထောက်လိုက်နဲ့ ဆယ်နာရီခွဲပါလေရော။
ကားတံခါးကိုဆိုင်ကကောင်လေးကဖွင့်မလို့ပြေးအလာ သူက ရတယ်ညီလေး ကိုယ်ဖွင့်မယ်ဆိုပြီး တျဲတက်တော့ တဲ့ တံခါးဖွင့်ပေးတယ်။
လမ်းမှာ မောင်က အနမ်းတစ်ပွင့်လက်ဆောင်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ မနက်ဖြန် အမေတို့ပါခေါ် ပြီး ရွှေတိဂုံသွားကြစို့တဲ့လေ။ ကားပေါ်ကဆင်းခါနီး မောင်က အာဘွား ပေးတယ် 😘😘
ညအိပ်တော့ အတွေးထဲ မောင်ရောက်လာတယ်။
တံတောင်နဲ့တွတ်မိတဲ့နေရာလေးကနာနေတော့ စိတ်ထဲ တစ်မျိုးကြီး ခံစားရတယ် ။ မောင့်ဆီက မက်ဆေ့ခ်ျရောက်လာတယ်…တျဲ မုန့်ဆိုင်မှာ အရမ်းနာသွားလားတဲ့။ မောင် တမင်လုပ်တာမဟုတ်ရပါဘူးဗျာတဲ့။ သူပြောမှ လူက စိတ်ထဲ ရှိန်းခနဲ ဖြစ်ရောလေ။ အိပ်တော့မယ် မောင် ဆိုပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။မနက်လာခေါ်မယ်နော်တဲ့။
သူအဲ့လိုပြောမှ စိတ်ထဲ က တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရင်သားကို ကိုင်ကြည့်မိလိုက်တယ်။ နို့သီးခေါင်းကို ထိမိတော့ ထောင်နေတာ ။ ပိပိလေးစမ်းမိတော့ အရည်လေးတွေစိုနေတော့ လက်ကလေးနဲ့ အစေ့လေးကို ပွတ် လက်ချောင်း လေးထည့်ဆွကစားရင်း အာသာဖြေမိတော့တယ်။
မနက်ကျတော့ အစောလာခေါ်မယ်ဆိုတဲ့မောင်က သူ့ဆိုက်တွေထဲပတ်ကြည့်ပြီးမှလာတော့ ကိုးနာရီကျော်နေပြီ။ ရွှေတိဂုံဘုရားကို အမေ့ကို အေးဆေး ဖူးစေပြီး မောင်နဲ့ကိုယ်က တစ်ပတ်ပတ် အရိပ်ရတဲ့နေရာလေးမှာ အတူထိုင်ကန်တော့ဖြစ်တယ်။ မောင်နဲ့အတူ သွားရတဲ့အချိန်က ရှားပါးလွန်းတော့ အတူရှိနေရတဲ့အချိန်က မောင့် မေတ္တာ ရိပ်နဲ့ အေးချမ်းနေတာမျိုး ခံစားရတယ်။ ရွှေပလ္လင်မှာ မနက်စာ အတူစား ပြီးတော့ အမေ့ကို အိမ်ပြန်ပို့တော့ မောင်က ကိုယ့်ကို သူနဲ့လိုက်စေချင်တဲ့ပုံမို့….အမေ သမီး ကိုဇော်မိုး နဲ့ ဘဏ်ခဏလိုက်ကူမို့။ နေ့လယ်စာလည်း အပြင်မှာပဲ စားမယ်အမေလို့ပြောပြီး ပြန်လိုက်ခဲ့တယ်။ မောင့်အလုပ်တွေပြီးတော့ ညနေစောင်းနေပြီ။ တျဲ ပျင်းနေပြီလား တဲ့လေ။ ညနေစာတျဲဘာစားချင်လဲ…ဘယ်သွား ကြမလဲတဲ့။
ကားပေါ်တက်တော့ မောင်က ကိုယ့်လက်ကို ကိုင်ပြီး သူ့ရင်ဘတ်မှာဆွဲကပ်ထားတယ်။ ကိုယ်ကစနောက်နေကျပုံအတိုင်း မောင့်ကို ဆွဲဆိတ်လိုက် နေလောင်လို့ညိုနေ တဲ့ မောင့်အသားအရည်နဲ့ နဂိုဖြူကိုယ့်အသားချင်း ယှဉ်ပြီး တွေ့လား မောင် တျဲကို ပြိုင်ဖြူမလားဆိုပြီး စနောက်နေကြတယ်။ ကားမောင်း နေ တဲ့ မောင့်ပခုံးကိုမှီပြီး ပေါင်ပေါ်မှာမောင့်လက်နဲ့ကိုယ့်လက်တင်ထားရင်း မောင်က ဂီယာထိုးဖို့ လက်အဖြုတ် ကိုယ့်လက်က မတော်တဆ မောင့်ပုဆိုးထဲ ချော်ကျသွားပြီး မောင့်ညီလေးကိုင်မိသလိုဖြစ်သွားရတယ်။ ထူပူပြီး မောင့်မျက်နှာကိုမော့အကြည့် မောင်က ရုတ်တရက် ကိုယ့်ကို အနမ်း
လန့်ပြီး မောင် ဂရုစိုက်မောင်းလေ ဆိုးနေပါလား
“တျဲ မုန့်စားပြီးရင် ရုံးခန်း ခဏလိုက်ခဲ့ဦးနော်”
သူ့ရုံးခန်းလိုက်သွားတယ်။ မရောက်ဖြစ်တာ ကြာပြီမို့ အခန်းအဆင်အပြင်ကပြောင်းနေတယ်။ “ဟယ် မောင်က အိပ်ခန်း တောင် ပြင်ထားတာပဲ။ အိမ်သာ ရေချိုးခန်း နဲ့ ရှယ်ပါလားမောင်”
“ဟုတ်တယ် တျဲ မောင် ခဏတဖြုတ်နားဖို့လေ။
တျဲ ခဏထိုင်ဦးနော်။ မောင် အလုပ်လေးလက်စသတ်မို့။ ဒါမှမဟုတ် တျဲ ညောင်းရင် ခဏ ဝင်နားလိုက်လေ…. ဟုတ် မောင်
အခန်းထဲ ဝင် ခုတင်ပေါ် တက် ခြေလေးဆန့်ပြီး နားတာ မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားတယ် ။
တျဲရေ ထတော့ ညနေစောင်းကြီး အိပ်ပျော်သွားတာ လား။ ဖျားလိမ့်မယ်တျဲရေ ဆိုပြီး ဆွဲထူတာ
ကိုယ်က ခလေးဆိုးလို မောင်ဆွဲထူကွာ လို့ဂျီတယ်။ မောင့်ခမျာ ဆွဲထူရရှာတယ်။ ကိုယ်က ညစ်ပြီး ဆွဲထားတော့ မောင့်ခမျာ ကိုယ့်အပေါ် ပိကျလာပါရော
“မောင်” ထကွာ…တျဲကစတာကို ဖိထားတယ်
စကားမဆုံးခင် မောင့်ဆီက အနမ်းတွေ ဝင်လာတယ်။ ပါးကို ဖွဖွလေးကိုက်ပြီး မောင် အူယားလာပြီနော်တျဲ မရတော့ဘူး
အသက်ရှူကျပ်တယ်မောင် ခဏလွှတ်ပါ ဆိုမှ မောင်က ဖက်ထားတာလျှော့လေရဲ့
ခညားဂျိကို မချစ်ပါဘူး လူကို မတရားဖျစ်ညှစ်ပြီး ကိုက်ပြီး မှ
နာသွားလား…. မောင်က ဖွဖွလေးကိုက်တာ ဆိုပြီး လက်မောင်း သားကို ထပ်ကိုက်တယ်။
ကြက်သီးတွေ ထပြီး သူ့ပေါင်တွင်းကြော ဆွဲလိမ်ပစ်တော့ မောင်က လက်ကို အတင်းဆွဲပြီး ပေါင်ကိုစေ့လိုက်တယ်။
တျဲ ချစ်တယ်ကွာ သိလား မောင်အူယားအောင်မလုပ်နဲ့ နော် တဲ့
မောင့်ရင်ဘတ်စမ်းကြည့်ဆိုပြီး ရင်ဘတ်နားလက်ကပ်ထားတယ်။ ကိုယ်ကလည်း စချင်လာတာနဲ့ မောင့်ရင်ဘတ်ကအသံ တျဲနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး ရင်ဘတ်နား ကပ်နားထောင်ပြီး သူ့မေးစေ့ကို ရွှတ် ကနဲ လှမ်း နမ်းလိုက်တာ မောင်က တျဲရယ် မောင့်စိတ်တွေ ထိန်းမရအောင် တျဲ ရယ် ဆိုပြီး နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်နမ်း လက်တွေက စနေနှစ်ခိုင်ပေါ်ပြေးလွှားပွတ်သပ်နေလိုက်… တင်ပါးကို ဖျစ်ချေနေလိုက်လုပ်နေတော့ ညီမလေးက စိုသလိုလို ရှုံ့ပွပွ ညှစ်ချင်သလိုလို ဖြစ်လာတယ်။
လို့ အာမေဋိတ်သံထွက်သွားတယ်။ မောင်ရဲ့လက်က ညီမလေးကို အပေါ်ကနေအုပ်ကိုင်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ်ဝတ်ထားတာက ဆွဲသားစကတ် အတို ဆိုတော့ မောင်က အပေါ်ကနေ ဖိပွတ်ကစားနေတော့ ညီမလေးငိုစပြုနေပြီလေ။
တျဲ… မောင့် ညီလေး သနားပါတယ်တဲ့။ အပြင်ကိုထွက်ချင်လို့ တျဲခဏကိုင်ပြီး လေပေးရှူပါလား တဲ့… ပြောပြီး လက်ကို သူ့ညီလေးဆီပို့တယ်။
အမလေးလို့စိတ်ထဲကနေ တမိလိုက်တယ်။ မောင့်ညီလေးကတင်းတင်းကြီး။ မောင်က ပုဆိုးကို ချွတ် အန်ဒါဝဲ ကိုချွတ်လိုက်တာ မောင့်ညီလေးက ခုန်ထွက်လာသလားအောက်မေ့ရတယ်။
မူဗီတွေထဲမှာသာ မြင်ဖူးတဲ့ ကိုယ် အပြင်မှာ
နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့မြင်လိုက်ရတာ အကြောတွေထောင်ပြီး နီရဲပြောင်တင်းနေ တဲ့ မောင့်ရဲ့ညီလေး ပါပဲ။ တျဲ မောင့်ညီလေးက တျဲညီမလေးနဲ့ တွေ့ချင်တယ် တဲ့လေ။ ကိုယ် ငြင်းချင်တယ်
တျဲ လက်မြှောက်လိုက်….. အမိန့်နာခံတဲ့စစ်သား တစ်ယောက်လို မောင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ် နေမိတယ်။ ဘရာဇီယာချိတ်ကို မောင်ဖြုတ်လိုက်တယ်။ တျဲရယ် ဖြူဝင်းနေတာပဲဗျာ တဲ့။
ရင်သားတွေ ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ် နို့သီးခေါင်းကို ချေလိုက်တော့ နေရခက်လာတယ်။ မောင်က နို့ကို စို့ပေးတော့ အဲ့ဒီလို ခံစားချက်မျိုးမရဖူးတော့ ရင်ထဲ ချားရဟတ်စီးရသလို လှိုက်ဖိုမောလာတယ်။ မောင်က တျဲ ထိုင်လိုက်ဦးတဲ့။
ထိုင်လိုက် တော့ မောင်ကပါထိုင်ချတယ်။ ပြီးတော့ ပေါင်ကိုဆွဲကားပြီး ခေါင်းကို ပေါင်ကြားဝင်ပြီး ညီမလေးကို နမ်းတယ်။
ဟာ မောင် တျဲ ကို ငရဲကြီး အောင်လား
ကောင်းစေချင်လို့ ပါ တျဲရယ်
ပိပိထဲ မောင့်လျှာ နွေးနွေး ဝင်လာတဲ့အသိ
ငါ့ကို မောင်က ဒါတွေလုပ်ပေးနေတာပါလားဆိုတဲ့ ပီတိ… မောင့်ကိုအားနာတဲ့အသိတွေက မောင့်အယုအယကြားမှာ အလိုက်သင့်မျောပါနေ ခဲ့တယ်။ မောင် လုပ်ပေးတဲ့အရာတွေက ဘဝမှာ တစ်ခါမှမရဖူးတဲ့အထိအတွေ့မျိုး ဒီလိုခံစားချက်မျိုးက ခဏခဏ ခံစားချင်တဲ့စိတ်တွေ ဖြစ်နေ ခဲ့တယ်။
မောင်ထလာပြီး ကိုယ့်ကို နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်နမ်းပြန်တယ်။ မောင့်ဆီက ကိုယ့်ညီမလေးရဲ့ ကြည်နူးမျက်ရည်နံ့လေးရနေတာကိုက ဖီးလ်တစ်မျိုးပေးစွမ်းတယ်။ တျဲ မောင့်ညီလေးကို ပြုစုပေးမယ် မလားတဲ့။ မငြင်းရက်သူပါ မောင်
စိတ်ထဲရှိသလိုသာ လုပ်ပါတျဲရယ်တဲ့။ မကိုက်မိရင်တော်ပါပြီ… ဒါလေးပဲ ချမ်းသာတာမလို့ပါတဲ့။ 😏😏😏
ထိုင်ချလိုက်ပြီး မောင့်ညီလေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ အရင် တို့ထိလိုက်တယ်။ ထိပ်ကလေးက ရဲပြီးတင်းပြောင်နေတယ်။ အပေါက်ကလေးထိပ်မှာ အရည်ကြည်လေးတွေစို့နေတာ။ မောင့်ရဲ့ ညီလေးက မူဗီထဲကလို ဆိုဒ်လွန်မဟုတ်ပေမယ့်
လုံးပတ်ထွားတယ်။ ညီလေးကို ချိုချဉ်စုပ်သလို
စုပ်လျက်ကြည့်တာ မောင့်ဆီက အာ့ ဆိုတဲ့အသံ ထွက်လာတယ်။
လိင်တံဘေးပတ်လည်ကို လျှာနဲ့ယက် မူဗီထဲကလို မြင်ယောင်ကြည့်ပြီး မောင့်ကို ကျေနပ်စေတယ်။မောင့်ရဲ့ညီလေးမှာရှိတဲ့ ဥလေးကို ကိုင်ကြည့်ကစားမိနေတယ်။တျဲ အပေါ်တက် တော့တဲ့…ကုတင်ပေါ်တက်လိုက်တယ် လှဲအိပ်လိုက်တျဲ တဲ့…. ပက်လက်လှန်အိပ်တော့ မောင်က ညီမလေးကို ပွတ်ပြီး လက်ခလယ် ကို မသိမသာထိုးထည့်တော့….အား…မောင် အရမ်းမထည့်နဲ့
နာတယ် ။ တျဲ မာစတာဘိတ်လုပ်ရင်မထည့်ဘူးလား။ ဟင့်အင်း မောင် အပေါ်ကပဲ ပွတ်တာ။
ပြောနေရင်း မောင်က သူ့ညီတော်မောင်ကို ပိပိထဲ ထည့်တော့…. အား နာတယ်မောင်….မနာစေဘူးတျဲ ပြောပြီး ချော့ထည့်တော့ လည်ချောင်းထိဝင်သလို တစ်ဆို့ဆို့နဲ့မာတင်းတင်းအရာတစ်ခုက ထိုးဝင်လာတယ်။ မောင်က တင်းမထားနက် အရမ်းနာမယ် တင်းထားရင် တျဲ စိတ်ကို လျှော့ အသက်ရှူ တဲ့။ မရဘူးမောင် နာတယ်ဆိုတော့ မနာစေရဘူး မောင် လုပ်ပေးမယ်တျဲ တဲ့။
မောင်က ပြန်ထုတ်ပြီး ညီမလေးကို လျှာနဲ့လျက်ပေးပြန်တယ်။ ပိပိထဲကအရည်တွေထွက်လာတယ်။ မောင်က ဒစ်ထိပ်လေးနဲ့ အစေ့လေးရှိတဲ့မြောင်းလေးထဲ ထိုးကော် ပွတ်လိုက်နဲ့ လုပ်ပေးနေတော့ အစိလေးကိုထိလိုက်ရင် ပိပိက ညှစ်ချင် မောင့်ရဲ့ ညီလေးကို ထည့်ပေးရင်ပိုကောင်း မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးဝင်လာတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေက မောင့်ရဲ့ ဖင်လုံးလုံးလေးကို ဆွဲဖျစ်ညှစ်မိရက်သားဖြစ်နေတယ်လေ။
အ့…..ရုတ်တရက် မောင်က ချစ်ရည်ပြည့်နေ တဲ့ ညီမလေးထဲကို မောင့်ရဲ့ ညီလေးကို ထည့်လိုက် တယ်။ မောင့်ရဲ့ အပြုအစုအယုအယကြောင့် ခုနကလို နာတယ်လို့ မခံစားမိတော့ပဲ ပေါင်ကိုကား မောင့်ခါးကို လှမ်းချိတ်ပြီး မောင့်ကို ဆွဲဖက်ထားလိုက်မိတော့တယ်။ မောင်က အသာအယာ အသွင်းအထုတ်လုပ်နေရင်း ချိုချို ကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ဘယ်ညာစို့လိုက် နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်လိုက်နဲ့ လုပ်ပေးနေတော့ ကာမအရသာထူးတယ်ဆိုတာ ဒါပါလား ဆိုပြီး စိတ်တွေက ပိုပိုထလာမိတယ်။ မောင်က ခါးကိုမတ်လိုက်ပြီး ကိုယ့်ခါးကို လှမ်းဆွဲ အဝင်အထွက် ကို ပုံမှန်လေးလုပ်ပေးနေတယ်။ တျဲရယ် ကြပ်ကြပ်ကလေးစေးစေးလေးနဲ့ လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာတဲ့။
ဗျစ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ်
အင်း..ဟင်း..ဟင့် မောင်ရယ် အား…ရှီး ဆိုပြီး အသံထွက်တဲ့အထိပဲ။ မောင်က တျဲ ပြီးချင်နေပြီလား တျဲအဖုတ်က အရမ်းညှစ်နေတယ်။ မောင်လည်း ပြီးချင်နေပြီဆိုပြီး အသွင်းအထုတ် အရှိန်မြှင့်လာပြီး အချက်နှစ်ရာလောက်ဆောင့်အပြီးမှာ သုတ်ရည်တွေပန်းထွက်သွားပြီးတော့
တျဲ ကောင်းလား ဟင် တဲ့။ သူ့ညီလေးကို ပိပိထဲက မထုတ်ပဲ တပ်ထားရင်း မေးတယ်။
တျဲ လမ်းကောလျှောက်နိုင်ပါ့မလားတဲ့။ မောင့် အချစ်ကြမ်းသွားလို့ တျဲ ညကျရင် ပိပိနာနေတော့မှာပဲတဲ့လေ။
မောင်နဲ့အတူ ညစာသွားစားကြတယ်။ ဗိုက်လည်း အရမ်းဆာနေသလို အိပ်လည်း အရမ်း အိပ်ချင်နေပြီ။ လူလည်း ပင်ပန်းနေပေမယ့် ထုတ်ဖော်ပြောဖို့ခက်ခဲတဲ့ ကြည်နူးခြင်းခံစားရတယ်။ အိမ်အပြန်လမ်းမှာ မောင့်ပခုံးကို မှီပြီး ပြန်ရတာ ကြည်နူးစရာတွေအပြည့် နဲ့ပေါ့။ အိမ်ရှေ့ကားရပ်ပြီး မောင်က တျဲရေ အိပ်မက်လှလှမက်ပါစေ ဆိုပြီး အနမ်းတစ်ပွင့်ခြွေချခဲ့တယ်။
မောင် ခဏလောက်ငုံ့ပါဦး ဆိုပြီး မောင့်နဖူးကို ပြန်နမ်းလိုက်တယ်။ အိမ်ရောက်တော့
အမေက ငါထင်သားတဲ့ ဟို မအားတဲ့ ခရိုနီကို အတော်မှ နှိပ်စက်ခဲ့ရဲ့လားတဲ့။ အမေ့ကို စိတ်ထဲကတော့ သူကနှိပ်စက်တာ အမေလို့ ပြန်ပြောပြီး
တစ်ကယ်တမ်းကျတော့ အသံထွက်တာ ဟီးဟီး တဲ့။
ဒီလိုနဲ့ မောင်အားတဲ့ရက် ကိုယ်အားတဲ့ရက် တိုက်ဆိုင်ရင် ခရီးတိုလေးထွက် မောင်နဲ့ ချစ်ရည်လူးလိုက် နဲ့ အချစ်ကာမတောမှာပျော်နေကြတယ်။ တစ်ရက်မှာ ဝမ်းသာဝမ်းနည်းသတင်း ရုံးမှာ Fax ဝင်လာတယ်။ ရာထူးတိုးနဲ့ နေပြည်တော်ကို ပြောင်းရမယ်တဲ့။ မောင့်ကို ပြောပြီး ငိုတော့ မောင်က တျဲရယ် မောင်က နေပြည်တော်ကို အလုပ်ကိစ္စ ခဏခဏလာနေရမှာလေ။ မောင့်နှလုံးသားထဲမှာ တျဲပဲရှိတာ မောင် တျဲကို ပစ်မထားပါဘူးကွာ တဲ့။ အမေ့ကိုလည်း စိတ်ချ မောင်ရှိနေတယ်လေ တဲ့။ မောင့်ကို ချစ်လွန်းလို့ ဖက်ပြီး ငိုမိတယ်။
နေပြည်တော်ကို ပြောင်းတဲ့နေ့က မောင်လိုက်ပို့တယ်။ မောင့်မျက်နှာကို တမော့မော့နဲ့ လစ်ရင် မေးဖျားကို လှမ်းနမ်းလိုက် မောင့်လက်မောင်းကို ဖွဖွလေးကိုက် မောင့်ပေါင်ပေါ် လက်တင် မောင့်ညီလေးကို ဖွဖွလေးကိုင် ဂွင်းထုလိုက်လုပ်နေတော့ မောင်က လူဇိုးမလေးနော်…မောင်အူယားလာပြီ…. ညကျရင် သတိထားတဲ့
ဟိုတယ်ရောက်တော့ နှစ်ယောက်အတူ ရေချိုးခန်း ဝင် မောင်က ပိပိလေးကို ရေဆေးပေး ပြီးတျဲ ပေါင်ကားလိုက်ကွာတဲ့။ မောင်က ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီး လျှာအပြားလိုက် ပိပိထဲထည့် ယက်ပေးတာ ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ်လို့ မောင်အကျင့်လုပ်ပေးတာ တျဲ အဲ့အရသာကို အရမ်းကြိုက်မိနေတာလို့ပြောမိတဲ့အထိပဲ။
မောင့်ကို နို့သီးခေါင်းကို ဖွဖွလေးကိုက် တဖြည်းဖြည်း အောက်ကိုလျှောလာပြီး မောင့်ရဲ့ ဥ နှစ်လုံးလေးကို ပွတ် လီးဒစ်လေးကို လျှာလေးနဲ့ယက်ပေး မောင်ကြိုက်တဲ့ ထိပ်အပေါက်လေးထဲ လျှာထိပ်လေးထည့် လုပ်ပေးနေတော့ မောင်က ကောင်းလိုက်တာ တျဲရယ် မောင့်ညီလေး တျဲပါးစပ်ထဲ ထည့်လိုက် တဲ့။ ပါးစပ်ထဲထည့်တာ မောင့်ညီလေးက အကုန်မဝင်ဘူးလေ။ မောင်က အရမ်းမထည့်နဲ့တျဲ အန်တတ်တယ်တဲ့။ ပြောပြီး မောင်က ခေါင်းကို ဆွဲ ပါးစပ်ထဲ ထိုးညှောင့်တယ်။ တျဲရေ ထတော့ ဟိုဖက်လှည့်ကုန်းလိုက်တဲ့။ မောင်က ဖင်ဝလေးကို လျှာနဲ့ယက်ပေး။လက်က ပိပိထဲကိုထည့်မွှေနေတယ်။
နောက်ကနေ ပိပိထဲကို မောင့်ညီလေးထည့် လက်က နို့အုံကို လှမ်းညှစ်ပြီး အသွင်းအထုတ် လုပ်ေ န တဲ့ အရသာအသစ်ကို ဖီးလ်တက်မိနေတယ်။ မောင်က တျဲ မောင် နောက်ပေါက်လေး စမ်းကြည့်ချင်တယ်တဲ့။ ပြောပြီးထည့်တာ အရမ်းနာလို့ အသံထွက်အော်မိတယ်။ နာလွန်းလို့မျက်ရည်ကျတော့ မောင်က တျဲ မငိုနဲ့ မောင် မလုပ်တော့ဘူးနော် စိတ်မဆိုးနဲ့နော် ချစ်တယ် နော် သိလားဆိုပြီး နမ်းတယ်။ အဲ့ညက မောင်နဲ့ သုံးချီလောက် ဆွဲဖြစ်ကြတယ်။ မောင်က တော်တော် လုပ်နိုင်တဲ့သူ။ လေးဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်အသာလေးပဲ။ ကိုယ်က မောင်နော် တပ်ထွက်လို့ တင်လိုက်မယ်လို့ ခဏခဏစလို့ များမခံချင်စိတ်နဲ့လုပ်သလားအောက်မေ့ရတယ်
စနေ တနဂ်နွေ နှစ်ရက်လုံး မောင်နဲ့ အပြင်ထွက်လည်လိုက် ညကျရင် အချစ်ပွဲနွှဲလိုက်နဲ့ မန်းဒေးကျ ရုံးလိုက်ပို့..ရုံးမှာသတင်းပို့ပြီး ရုံးကပေးတဲ့ ယာယီအခန်းကို မောင်လိုက်ပို့ပြီး ညနေခင်းမှာ မောငျပွနျသှားခဲ့တယျ။ အလုပ်တွေများရင် မောင့်ကို ခဏလောက်မေ့ထားလို့ရနေပေမယ့် အလုပ်ပါး တဲ့ အချိန် နားတဲ့အချိန်ေ တွေမှာ
ညအိပ်ရင် မောင် နဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးခဲ့တာတွေ
သတိရ အာသာဖြေရင်းနဲ့ နေ့ကိုလစား လကို နှစ်စားခဲ့တယျ။
တစ်ရက် အိမ်မှာ ပိတ်ရက်မို့ နေနေရင်း ရုတ်တရက် အသက်ရှူ ကြပ်သလိုလိုဖြစ် သတိလ်သွားခဲ့တယ်၂ မိနစ်လောက်ပေါ့။
ငယျငယျက အဲ့လို ဖွဈခဲ့ဖူးတာ
သတိရလို့ ပြင်ပဆေးခန်းမှာ သွားပြတော့ ဆရာဝန်က ရာဇဝင်မေးလို့ ပြောပြရင်း ဓာတ်မှန်ရိုက်ဖြစ်တော့ ရောဂါဟောင်းပြန်စချင်နေတာတွေ့ရတယ်
ဆရာကရှင်းပြတယ် သမီး စကားပြောနေရင်း စကားကို မေ့သွားတာမျိုး…ခဏခဏ သတိလစ်သလိုမျိုးတွေ ငယ်ငယ်ကလို ဖြစ်လာဦးမှာပဲ တဲ့
ဆရာ သမီး ဗိုက်လည်း ခဏခဏနာတယ်။ ရင်ဘတ်အောင့်တယ်ပြောတော့ ဆရာက သက်ဆိုင်ရာ နှလုံးအထူးကုနဲ့လွှဲပေးတယ်။
Medical check up လုပ်ပြီးလို့ အဖြေ သိရ
တဲ့အခါပထမဆုံး သတိရတာ မောင် နဲ့ အမေ
ဘယ်သူ့ကိုမှ မ ပြော ရက်ခဲ့ဘူး။
အမေက အိပ်မက်မက်လို့ သမီးလေး နေမှ ကောင်းရဲ့လားတဲ့။အချိန်သိပ်မကွာပဲ မောင့်ဆီက ဖုန်းဝင်လာတယ် ။တျဲရေ နေကောင်းရဲ့လား တဲ့လေ။
ညတိုင်း ငိုမိတာ ရင်ဘတ်ပိုအောင့်လာတယ်
စိတ်မငြိမ်လို့ ခလုတ်ထိမှ အမိတဆိုသလို ဘုရားကိုအမြဲနားပူတိုက်မိလာတယ်။ တရားတွေနာမိတော့စိတ်တွေအနည်ထိုင်စပြုလာတယ်။ ကိုယ့်ကြောင့် သူများတွေ စိတ်မဆင်းရဲစေချင်တော့ဘူး။ နေ့တိုင်း Diary ရေး ဖြစ်ခဲ့တယ်။ မောင့်ကိုသတိရတိုင်း ရေးဖြစ်တယ်။ မောင့်မွေးနေ့ရောက်ခါနီးမို့ မြစ်ကြီးနားက မောင်လေးတစ်ယောက်နားက ပုဆိုးမှာပြီး လက်ဆောင်ထုပ်လေးပြင်ထားတယ်။
ဒီကာလကြားထဲမှ တ စ်ခုခုများငါ ဖြစ်ခဲ့ရင် ဆို တဲ့စိတ် နဲ့ အရာရာကိုပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားမိလာတယ်။ အတူနေသူငယ်ချင်းတွေကို မှာထားတယ်။ ကိုယ် သာ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် အမေ့ဆီပို့ဖို့ရယ် မောင့်ဆီပို့ဖို့ရယ်ကို လိပ်စာနဲ့တကွ
ပြောပြထားခဲ့တယ်။ မောင့် ဖက်က
ကိုယ့်ကို စိတ်ကုန်စေမယ့်ဖြစ်ရပ်မျိုး လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတုန်း တိုက်ဆိုင်စွာပဲ ဝေ ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးက ကိုယ်တွေဘဝထဲရောက်လာတယ်။ အမှန်တော့ သူ့ကို အစက သတိမထားမိဘူး။ သူက ကိုယ့်ကို မမကို ခင်လို့ ပါရောပြီး သူတစ်ကယ်ခင်ချင်တဲ့ကိုဇော်မိုးရဲ့ အကောင့်ကို အက် အသည်းလေးတွေပေး အတန်ရှည်ယူ အမမှုန် အထီးလင်းမလေး ဖြစ်နေတယ်။ သူ့ခံယူချက်က Fake မှာ RS ဖြစ်တာ အပြင်မှာ ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဂရုစိုက်ဖို့မလိုဘူးတဲ့လေ။ သူက အိမ်ထောင်မပြုပဲ အပျိုကြီးလုပ်မှာတဲ့။ လင်ယူသားမွေးစိတ်ကုန်တယ်များ ထင်မိတာရယ်။ တကယ်တမ်းကျ မောင်ရေးတဲ့
စာ အသည်းပေးလိုက် Care ပေးလိုက်နဲ့ ပိုစ့် တစ်ခုမှအလွတ်မပေးတဲ့ သူ ရိုးသားတဲ့ဖိုးသခွားမ လေးဖြစ် နေ တာကိုသိလာရတယ်။
မောင် သူ့ကို မကြိုက်မှန်းသိပေမယ့် မောင်ကိုယ့်ကိုစိတ်နာစေဖို့က သူနဲ့သမုတ်မှရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာတယ်။ ဝေ့ရဲ့ အနေအထိုင်မတတ်မှုတွေလည်းပံ့ပိုးပေးနေတယ်။
မောင့်ကို ပေးစားလိုက် စွပ်စွဲလိုက် ခဏခဏလုပ်နေတော့ မောင် ကိုယ့်ကို စိတ်ကုန်လာပြီး
စကားမပြောပဲ နေလာတယ်။ ညတိုင်း လူမသိသူမသိ ခိုးငိုရတဲ့ရက် တွေ များလာခဲ့တယ်။
ကိုယ်နေ တဲ့လေးလွှာ ပြတင်းပေါက်ကနေ ခုန်ချ လိုက်ချင်စိတ်တွေဖြစ် လာ ခဲ့ တယ်။ မောင် ကိုယ့်ကို ပစ်ထားတာခံနိုင်ရည်ရှိချင်ယောင်ဆောင်ရတာ အရမ်းပင်ပန်းရတယ်။ မောင့်ဆီက အရင်လို တျဲ နေကောင်းရဲ့လား… တျဲရေ အလုပ်တွေဖိလုပ်မနေနဲ့….တျဲ…တျဲရေ….ဒီလို ဂရုစိုက်ခြင်းတွေ ကြဲလာ ခဲ့ ပြီလေ။ မိနန္ဒီ နင့်အပြစ်နင်ခံဆိုပြီး အံကြိတ်ခံခဲ့ရပါတယ် မောင်။ မောင့်အတွက် နေ့စဉ် ကုသိုလ်ဒါနပြုပေးဖြစ်တယ်။ ဘုရားရိပ်က အေးချမ်းတယ်။ မောင်အဆင်ပြေဖို့ဆုတောင်း ပေးဖြစ်တယ်။
မောင့်ကို ဒီ့ထက်ပိုပြီး စိတ်ပြတ်သွားစေချင်တယ်။ မောင် ပေးထားတဲ့ အမှတ်တရ ချစ်သက်လက်ဆောင် အားလုံးကို ကားဂိတ်ကနေပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်။
မောင့်ကိုလည်း ပြတ်ကြဖို့ တောင်းဆိုတယ်။ မောင်က အသစ်တွေ့နေပြီလား တျဲ တဲ့
ရင်ထဲကအောင့်နေပေမယ့် အပြုံးမပျက် မောင်လည်း အသစ်ရနေသလို မချယ်ကောမရဘူးထင်လားလို့။ မောင်ပေးခဲ့တဲ့ လက်ဆောင်တွေအတွက် ကျွန်မ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပုံအပ်ခဲ့ ပြီးပြီမို့ အလကားမဖြစ်ပါဘူးလို့…စိတ်နာအောင်
ပြောခဲ့မိတယ်။ စိတ်တိုလို့ အသားတဆတ်ဆတ်တုန်နေ တဲ့ မောင့်မျက်နှာကို မြင်ယောင်ပြီး စိတ်ထဲကနေ ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့မောင်လို့
မောင့်ကို ချစ်လွန်းလို့ ထားခဲ့ရသူပါ။ အရမ်းပဲ ချစ်ပါတယ်…
ဒီစာလေးကို မောင်ဖတ်နေ တဲ့ အချိန်မှာ တျဲက မောင်နဲ့အဝေးဆုံးမှာ ရောက်နေပါပြီမောင်။
တျဲ မောင့်ကို မထားခဲ့ချင်ပေမယ့် တျဲရဲ့ကုသိုလ် ကံနည်းခဲ့တော့ ကျန်းမာသက်ရှည်ဆိုတဲ့ ဆုမပါခဲ့ဘူးကွယ်။ မောင်နဲ့အတူ အသက်ကြီးပြီး အိုမင်း သွားတဲ့အထိ ဘေးမှာ ဆေးပေးမီးယူ တိုင်ပင်ဖော်အနေနဲ့ နေသွားချင်ခဲ့သူပါမောင်။
မောင့်ကို ရင်နဲ့အမျှ ချစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဘဝဆိုတာ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် မောင်နဲ့တျဲ သက်ဆုံးတိုင် ပေါင်းဖက်ခွင့်လေးရပါရစေ မောင်။ မချစ်လို့ ထားရက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးမောင်ရယ်။ မောင့် ကို ချစ်လွန်းလို့ ထားခဲ့တာပါ။ မောင်နဲ့ ချစ်ခွင့်ရခဲ့တာ ဘုရားပေးတဲ့ဆုလာဘ်လို့ဆိုရင် မောင် နဲ့ ကွဲကွာခဲ့ရတာ ဘုရားပေးတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ပေါ့နော်။
တျဲ မောင့်ကို အမှန်အတိုင်း မသိစေချင်ခဲ့လို့ မောင့်ကို ညာခဲ့မိတာ ခွင့်လွှတ်ပါ မောင်ရယ်။ တျဲ မရှိတော့ပေမယ့် တျဲကို ပေးထားတဲ့ကတိအတိုင်း မောင်ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ နေပေးပါ။ တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့အခါ တျဲကို သတိရပေးပါ မောင်။ မောင့်ကို အရမ်း ချစ်ပါတယ်ရှင်။ အသွေးအသားထဲကချစ်ရသလို နှလုံးသားနဲ့ရင်းပြီးလည်း ချစ်ခဲ့ပါတယ်..မောင်
အရာရှိမ ဒေါ်ထားထားစိုး နဲ့ နေမိုး($$$)